China တံခါးအပြင်ဘက်တံခါးအပြင်ဘက်တံခါးအပြင်ဘက်တံခါးအပြင်ဘက်တံခါးမောင်းလက်ဝဲ / ကပ် 9017600359 9017600459 0007601359 စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ZODI အော်တိုအပိုပစ္စည်းများ
Mercedes Truck အပြင်ဘက်အပြင်ဘက်တံခါးတံခါးလက်ကိုင်ဘယ်ဘက် / ညာ 9017600359 9017600459 0007601359
Car Make: MERCEDES-BENZ အတွက်
ကားတံခါးတံခါးသည်အရည်အသွေးမြင့်သော Sprinter 901 902 903 တံခါးသော့ခတ်များကိုကိုင်တွယ်သည် - 0007601359
နာမည် ကားတံခါးတံခါးသည်အရည်အသွေးမြင့်သော Sprinter 901 902 903 တံခါးသော့ခတ်များကိုကိုင်တွယ်သည် - 0007601359
OEM OEM မူရင်းဒီဇိုင်း
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း L / C, T / T, Western Union, Moneygram, Paypal
ပို့ဆောင်ချိန် ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်း
အဓိကစျေးကွက် ဥရောပနိုင်ငံများ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့်အမေရိကန်များရှိကြသည်
Mercedes BENZ SPRINTER ATEGO AXOR သည်
VW LT 1996-2006 အတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ Volkswagen Transporter၊ Fiat Ducato၊ Ford Transit၊ Renault Master, Benz Sprinter, Iveco Daily စသည်တို့ပါဝင်သည်။ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအောက်ပါစိတ်ရင်းကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးနိုင်သည်။
၃။ Lock Cylinder
4. စက်နှိုး switch ကို
၆။ အခြားသူများ (ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ)
2, သတ်မှတ်ချက်များတစ် ဦး ကပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေး
5, Professional ကနည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာ;
6. ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ။
၇။ အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများ Systerm နှင့် Cooperations၊
စီးရီးအပိုင်း အော်တိုအပိုင်းအမည် အရည်အသွေးအဆင့်
အင်ဂျင်အပိုင်း Spark Plug၊ ဆလင်ဒါကိရိယာအစုံ၊ ဆလင်ဒါ၊ ဆလင်ဒါ၊ carburetor၊ ပစ္စတင်စက်၊ ပစ္စတင်လက်စွပ်၊ ရေနံစုပ်၊ တွန်းလှိုင်၊ အဆို့ရှင်၊ အဆို့ရှင်၊ စတီဒို၊ OEM, A
ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ Shaft kick starter, crank shaft, housing assy, ​​connection rod rod, sprocket set, clutch assy, ​​clutch disc, clutch pressure plate၊ ကွင်းဆက်စသည်။ OEM, A
ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ နောက်ဘက်အချက်အခြာ၊ နောက်ဘီး ဦး ထုပ်၊ ရှေ့ဗဟိုအချက်အလက် ဦး ထုပ်၊ ရှေ့ဗဟိုအချက်အချာ၊ sprocket၊ ရှေ့ဘရိတ် disk၊ ဘရိတ် pad၊ ဘရိတ်ဖိနပ်၊ အနားကွပ်၊ ရော်ဘာနောက်ဘက်အချက်အချာ၊ ကော်လာကူရှင်၊ ပြိုင်ကားစတီယာရင်၊ ပြောသောစကား၊ နောက်ဘီး sprocket၊ စသည်တို့ OEM, A
ကေဘယ်လ်ကြိုးအစိတ်အပိုင်းများ အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ cable ကို, clutch cable ကို, ရှေ့ဘရိတ်, မီတာ cable ကို, ရှေ့ switch ကို cable ကို, မြန်နှုန်း switch ကို, ဘက်ထရီလိုင်း, ဝါယာကြိုးကြိုး, နောက်ဘက်ဘရိတ် switch, မြန်နှုန်း cable ကိုစသည်တို့ OEM, A
ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ နောက်ဘက်ရှိ shock absorber၊ steering stem head assy၊ ဂီယာပြောင်းလဲမှုနင်း၊ စတီယာရင်ပင်စည် assy၊ ဘရိတ်လှောင်၊ ဘရိတ်ခြေနင်း၊ အိပ်ဇောမာဖလာ၊ ခြေထောက်ကျောရာဘာ၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ ဘေးဘက်ရပ်တည်ချက်၊ ရှေ့ထု၊ ဗဟိုရပ်၊ ထိုင်ခုံ၊ လောင်စာဆီ၊ ရွှံ့ကာရံထားသူ၊ ရှေ့ခြေနင်းလှံတံ၊ ကန်စတင့်၊ နောက်ချိတ်ချိတ်၊ ကွင်းခတ်ခေါင်း၊ လီဗာအစုံ၊ စက်နှိုးကွိုင်စသည် OEM, A
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ clutch / brake switch၊ ဘက်ထရီ၊ fly-wheel assy၊ clutch / brake lever & switch assy, ​​starter relay၊ horn, flasher, stator selfy assy၊ ကိုင်တွယ်သော့ခတ်၊ လောင်စာသော့ခတ်၊ stator assy၊ starter ကွိုင် / အလင်းကွိုင်, C, D, I , rectifier, စက်နှိုး switch ကို, ဦး ထုပ်လောင်စာဆီ tank ။ OEM, A
ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ မီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ၊ မီတာအာစီ၊ မှန်၊ ဦး ခေါင်း၏မီးခွက်၊ ဖုံးလောင်စာဆီအဖုံး၊ လီဗာကာကွယ်မှုအစုံ၊ အိမ်မီး၊ ရှေ့အကာ၊ မှန်ဘီလူးအမြစ်အလင်း၊ နောက်ဘက်ကာဗာ၊ ကွင်းကွင်း၊ ဦး ခေါင်းမီး၊ အမြီးအလင်း၊ ။ OEM, A
gasket စီးရီး ရေနံတံဆိပျကိရိယာအစုံ, gasket ဆလင်ဒါ, gasket အိပ်ဇော, အပြည့်အဝ gasket ကိရိယာအစုံ, ချုပ်ကိုင်ရော်ဘာအစုံ, carburetor အဆစ်စသည်တို့ OEM, A
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အမြီး, ခမောက်, စတစ်ကာ, ဦး ထုပ်, အဝတ်, လက်အိတ်, ဆေးသုတ်မာစတာ, နှိုးစက် system ကို - mp3, နှိုးစက်စနစ် mp3-2, နှိုးစက်စနစ်, လောင်စာဆီ tank, အရောင်နှင့်အတူနောက်ဘက်ခြေနင်း, အရောင် inflator နှင့်အတူနောက်ကျောခြေနင်း, grip ပွတ်တိုက်နှင့်အတူ အရောင်, တာယာတံဆိပျ, အရောင်နှင့်အတူချုပ်ကိုင်ရော်ဘာစသည်တို့
အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ZODI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ # 1 ဦး စားပေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများအားအမြဲပေးခဲ့သည်။
Brand Awareness မည်သည့်ခိုင်မာသည့်အမှတ်တံဆိပ်မဆို၏ရည်မှန်းချက်သည်သင်၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောတန်ဖိုးနှင့်စိတ်ကူးကိုသင်၏ ၀ ယ်ယူသူဖောက်သည်များအားသိရှိစေရန်အသိပညာပေးသည်။
အထူးကမ်းလှမ်းချက်များအရင်းအမြစ်ခွဲဝေမှု - စျေးကွက်သစ်များဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အားကူညီရန်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကတ်တလောက်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ အမေရိကန်စျေးကွက်၊ ဥရောပစျေးကွက်နှင့်အာဖရိကဈေးကွက်၊ တောင်အမေရိကဈေးကွက်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။
မှာယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်စစ်ဆေးပါ
2. စျေးနှုန်း၊ ခဲအချိန်၊ ထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ချက်, ငွေပေးချေမှုကာလအတည်ပြုပါ။
၃။ ZODI ရောင်းအားသည် Proforma ငွေတောင်းခံလွှာကို ZODI တံဆိပ်ဖြင့်ပေးပို့ပါသည်။
၅။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားကျွန်ုပ်တို့ငွေပေးချေမှုရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားပါမည်။
၆။ ထုတ်လုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်မည့် - Mass ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်များကိုအတည်ပြုရန်။ တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းသင်စီစဉ်နိုင်သည်။
၇။ သုံးစွဲသူများသည်လက်ကျန်ငွေနှင့် BEE သို့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း။ ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။ B / L မိတ္တူကူးခြင်းသို့မဟုတ် L / C ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။ ခြေရာခံနံပါတ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးဖောက်သည်များ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။
၈။ ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိပြီးသောအခါအမှာစာသည်“ ပြီးပြီ” ဟုပြောနိုင်သည်။
၉။ အရည်အသွေး၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စျေးကွက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပြုချက်များနှင့် ပက်သက်၍ BEE သို့အကြံဥာဏ်များ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
A: အင်ဂျင်အပိုပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆိုင်းထိန်းမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ဂီယာစနစ်၊ မော်တော်ကားစစ်ထုတ်စက်များ၊ ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများ။
ဖြေ။ ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိက၊ တောင်အာရှ၊ ယူကရိန်း၊ အီတလီ၊
A: အပ်ငွေအဖြစ် T / T က 30% နှင့်မပို့မီ 70% ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၃ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်အချိန်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
A: သင်၏နမူနာများသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံဆွဲခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့မှိုများနှင့်လ်တာတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
A: မပို့မှီ ၁၀၀% စမ်းသပ်မှုရှိသည်။
မေး။ ။ ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုရေရှည်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်မလဲ။
၂။ ဖောက်သည်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ်လေးစားသည်။ မည်သည့်နေရာမှပင်လာပါစေကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးသူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့သည်။
ရှေ့သို့ Mercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633 အတွက် Truck Belt Tensioner စက်သီး
နောက်တစ်ခု: MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 LH အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသော Head Lamp မီးတပ်ဆင်ထားသည်။
BENZ ACTROS MP2 L အတွက်မြူမီးခွက်: 9438200056 or R: ...
MB အက်ဥပဒေအတွက်ပလပ်စတစ်နောက်ဘက် Mudguard Oem 9435200020 ...
ဥရောပအရောင်းအ ၀ ယ်ကုန်တင်ကားများရောင်းအားအကောင်းဆုံး
Benz ဘရိတ်စည် OEM 62442 အတွက်စက်ရုံလက်ကား ...
Mercede အတွက် OEM 9608103516 LH ထရပ်ကားဘေးဘက်မှန် ...
MB အတွက်သံမဏိထရပ်ကားရှေ့ဘရိတ်စည် ၆၅၈၄၂၁၁၁၁ ကိုသွန်းလောင်းသည်